03 | November | 2008 | Save Burma
<!– pict ## for search indexer, do not remove –> A boy looks out of his house built of bamboo and thatch in Latkhitekun,avillage south of Yangon, October 28, 2008. Most cyclone survivors say prices of construction materials like bamboo and thatch are still very high for them, and using timber is out of the question. Six months after Cyclone Nargis slammed into army-ruled Myanmar, killing more than 130,000 people, many in the worst-hit Irrawaddy delta continue to rely on handouts to stay alive. The Tripartite Core Group, which comprises the United Nations, Myanmar and its regional neighbours, said there wasacontinued need for relief and longterm support. But only 53 percent of its $484 million aid appeal had been raised so far. Picture taken October 28, 2008. REUTERS/Aung Hla Tun (MYANMAR)
<!– pict ## for search indexer, do not remove –> People look out from their hut, built of tarpaulin and bamboo, located on the swamp of Pay Kunhasay village, Kawhmu Township October 28, 2008. Six months after Cyclone Nargis slammed into army-ruled Myanmar, killing more than 130,000 people, many in the worst-hit Irrawaddy delta continue to rely on handouts to stay alive. Picture taken October 28, 2008. REUTERS/Aung Hla Tun (MYANMAR)
03 Nov 2008 15:08:00 GMT
Source: Christian Aid – UK
Six months after Cyclone Nargis caused massive devastation in Burma Christian Aid says the country will require assistance for the foreseeable future. There is stillaneed for more permanent housing and disaster preparedness training; access to clean drinking water in the upcoming dry season is alsoamajor concern.
‘Cyclone Nargis made it easier for humanitarian agencies such as Christian Aid which hasalongstanding partnership with local organisations to work in Burma. We have been able to deliver assistance in an effective and accountable way,’ says Ray Hasan, Christian Aid’s head of programme policy for the region.
‘But despite concessions made in the Irrawaddy Delta after the cyclone, the junta’s restrictions on humanitarian access continue to obstruct aid workers in Burma,’ continues Mr Hasan. Christian Aid partners say that the majority of the people affected are still unable to start the process of rebuilding their lives. Resources remain limited and restrictions on freedom of movement are still in place.
To date Christian Aid has spent more than one million pounds in Burma on emergency aid and improved conditions foraquarter ofamillion people. Immediately following the cyclone partner organisations provided water containers and purifiers, food rations, emergency shelter, household items and clothing, and basic medicines.
Work is now proceeding with recovery work. A Christian Aid partner is providing 12 villages with goats and pigs and support to the fishing industry. Boats and nets are being distributed and 50 permanent shelters are being constructed.
‘The progress is surprising, everyone seems to be employed in constructing houses,’ says an engineers working with one partner organisation. ‘We don’t need to motivate the people here. They like to work together and they are looking after each other.’
Christian Aid has made disaster reduction trainingapriority; learning how to respond to disasters is essential to avoid the massive damages suffered by Burma from the cyclone in May. ‘In June we sent two engineers to visit our partner organisation in Orissa, India to learn about disaster response training,’ says Mr Hasan.
‘Our work in Orissa in training communities and building cyclone -resistant shelters has saved thousands of lives there.’ An engineer who travelled to India said: ‘We have brought back blueprints of designs which we have adapted for our local situation.
‘We need to modify these designs further. The priority right now is to meet the urgent needs for rebuilding peoples’ lives, both in terms of providing shelter but more importantly the spirit of community in the face of disaster.’
Christian Aid says pressure must be maintained on the regime to ensure unrestricted access to the affected areas and that the needs of the most vulnerable communities affected by Nargis are prioritised.
‘But it is also imperative that the donor community recognises the role of civil society in Burma and ensures local organisations are adequately funded. Thus far they have been most effective in responding to the crisis and they are crucial to the future development of Burma,’ says Mr Hasan.
Tagged with Cyclone Nargis
ပုံရိပ်နိုင်ငံရေး – အပိုင်း (၁)
ကျနော် ဘာကြောင့် ပုံရိပ်နိုင်ငံရေးကို ရေးရတာလဲ။
မဆလ စိတ်ဓာတ်၊ ဇီးရိုးဆမ်း (Zero Sum) အစွဲ၊ ကျနော်တို့ အားလုံးဟာ နိုင်ငံရေး (အတွေး) အမှောင်ထုအထဲက မထွက်နိုင်ကြသေးပါ။ ဒီအတွေးအမှောင်ထဲမှာ ရွာလည်နေကြတုန်း၊ ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ လူချတဲ့ ဉာဉ်ဆိုးကို အတုယူပြီး (လူချ)တဲ့ သံသရာဝဲမှာ လည်ရင်း (ညီညွတ်မှု)ကို မတည်ဆောက်နိုင်ကြဘူး။ ဒီစိတ်ဓာတ်ဆိုး၊ အတွေးဆိုး၊ အကျင့်ဆိုးတွေက လွတ်ထွက်ပြီး၊ လက်တွေ့ကျတဲ့ ပေါ်လစီနဲ့ ညီညွတ်မှုကို တည်ဆောက်ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီအောင်ပွဲ ခံစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ပုံရိပ်နိုင်ငံရေးကို တင်ပြ ဆွေးနွေးရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တိုက်တာ “အတွေးအခေါ်” နဲ့ “အကျင့်စရိုက်” ကို တိုက်တာပါ။ “ပါတီ” ကိုသော်၎င်း၊ “လူပုဂ္ဂိုလ်” ကိုသော်၎င်း၊ တိုက်တာ မဟုတ်ပါ။
တခုတော့ သတိပြုစေချင်ပါသည်။ ဆောင်းပါးတစောင်၊ စာတပုဒ်၊ အတွေးအခေါ် ပါသည့် နိုင်ငံရေး စာစောင်တခုကို ဖတ်ရာမှာ၊ မိမိ၏ “အသိ” knowledge ၊ ဘဝဖြတ်သန်းမှု၊ မိမိ၏ နိုင်ငံရေး ခံယူချက်အပေါ် မူတည်ပြီး၊ “နားလည်မှု” ကွာခြားနိုင်ပါသည်။
ညအခါ မိုးကောင်းကင်ကို မော်ကြည့်လိုက်ပါ။ မှိတ်တုတ်၊ မှိတ်တုတ် အရာကလေးများကို တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် “ကြယ်” ကလေးတွေဟု တွေးထင်ကြပါလိမ့်မည်။ အားလုံးသည် ကြယ်တွေ မဟုတ်ကြပါ။ တချို့မှာ “ဂြိုဟ်” Planets ဖြစ်ကြ၍၊ တချို့မှာ ကြယ်သန်းပေါင်းများစွာ ပါဝင်သော “ကြယ်အစု” Galaxies – များကို မှိတ်တုတ်၊ မှိတ်တုတ် “အစက်အပြောက်” ကလေးအဖြစ်သာ၊ သာမာန်မျက်စိဖြင့် တွေ့မြင်ကြရပါမည်။ အားကောင်းသော မှန်ဘီလူး၊ မှန်ပြောင်း (Telescopes) များနှင့် ကြည့်မှ ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပါသည်။ အားကောင်းသည့် မှန်ပြောင်းအပေါ် မူတည်၍ “အမြင်” ကြည်၊ မကြည်၊ ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ထို့အတူ စာဖတ်သူ၏ နောက်ခံ “အသိ” Background Knowledge – အပေါ် မူတည်၍၊ ဆောင်းပါး၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ အတိမ်အနက်ကို နားလည်မှု ပြောင်းလဲ၊ ပြောင်းလွဲသွားနိုင်ပါသည်။
“အသိ” အပြင်၊ ဘဝဖြတ်သန်းမှု အတွေ့အကြုံအရလည်း “အမြင်” ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။
ကောင်းကင်ပေါ်မှ ကြယ်၊ ဂြိုဟ်တို့ကို လေ့လာသည့်ပညာ Astronomy “နက္ခတဗေဒ” အပေါ် မူတည်၍ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော တကယ့် အဖြစ်အပျက်ကလေးနှင့် ဥပမာပြပါရစေ။ လွန်ခဲ့သည့် ၃-၄ လလောက်က ထင်ပါသည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရှိ လော့(စ်)အိန်ဂျိလိ(စ်) Los-Angeles-မြို့၏ မြို့တော်ဝန် အစည်းအဝေးတွင် လူဖြူရပ်ကွက် ကိုယ်စားလှယ်နှင့် လူမဲရပ်ကွက် ကိုယ်စားလှယ်တို့ အငြင်းအခုန် ဖြစ်ရာက၊ လူဖြူရပ်ကွက် ကိုယ်စားလှယ်က ‘Black-Hole’ ဟူသော စကားအသုံးအနှုံးကို သုံးစွဲခဲ့ပါသည်။ နက္ခတဗေဒ အရ Black Hole ဆိုသည့်အရာမှာ၊ Gravity “ဆွဲအား” ကြီးမားလွန်းသဖြင့် ၎င်း၏စက်ဝန်း Event-Horizon အတွင်း ကျရောက်သွားသော အလင်းရောင် Light ပင် ပြန်မထွက်လာနိုင်တော့ပါ။ ထို့ကြောင့် ပြန်ပေါ် မလာတော့သော အရာ (သို့မဟုတ်) လုံးလုံး ဆုံးပါးသွားပါလျှင် Black-Hole ဟု တင်စားလေ့ ရှိပါသည်။ သို့သော် သာမာန်အတွေးနှင့် ရိုးရိုးတွေးခဲ့လျှင်Black ဆိုသည်မှာ “အမဲ”၊ Hole ဆိုသည်မှာ “အပေါက်”၊ အမဲအပေါက်ဟု အဓိပ္ပာယ် ဖော်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူမဲရပ်ကွက်မှ ရပ်ကွက်လူကြီးက သူ့ကို လူမဲဖြစ်၍ သက်သက်စော်ကားသည်၊ နှိမ်ပါသည်ဟု ထင်မြင်ကာ ဒေါသူပုန် ထပါတော့သည်။ ရှင်းပြ၍မရ၊ တောင်းပန်၍ မရတော့ပါ။ ထို့ကြောင့် နောက်တနေ့ သတင်းစာများတွင် ပါလာကာ ကမ္ဘာအနှံ့ သတင်းပြန့်ကာ အရှက်တကွဲ ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျနော်က စေတနာသန့်သန့်နှင့် တင်ပြဆွေးနွေးသည်ကို တလွဲကောက်ကာ စွပ်စွဲ တိုက်ခိုက်လာပါလျှင် ကျနော် ဘာမှ တတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ လူတဦးတယောက်စီ၏ နားလည်မှု (အသိ)၊ စာဖတ်အား၊ ဗဟုသုတနောက်ခံ၊ ဘဝဖြတ်သန်းမှုများကို ကျနော် သိနိုင်စွမ်း မရှိပါ။
ဝါဒအတွေးခေါင်သူများ၊ သဘောတရား တာလီဘန်များ (Idealogy Talibans) ၊ လက်ဝဲသူငယ်နာ မစင်သေးသူများက ယုတ်ညံ့သော အသုံးအနှုန်းများနှင့် စော်ကားတိုက်ခိုက်လာလျှင်၎င်း၊ ပြည်သူတဦး၊ ဝေဖန်သူတဦးဟု အမည်မဖော်ရဲဘဲ အမှောင်ထဲက လက်သီးပုန်း ထိုးလိုသူများကို၎င်းး၊ ၎င်းတို့နည်းတူ ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်း အခြေမဲ့ ပြောဆိုချေပရန် ကျနော့်မှာ အခြေအနေ အခွင့်အရေး မရှိပါ။ အမည်ရင်းနှင့် ဗြောင်ရေးသူမို့ မိဖမျက်နှာ အိုးမဲမသုတ်ရဲပါ။ ထိုသူအသီးသီးကို အစွဲလွန် (ပုံရိပ်နိုင်ငံရေး) သမားများအဖြစ် နားလည်ပေးရုံသာ ရှိပါသည်။
ရိုးရိုးသားသား အမြင်မတူသူ၊ ကျနော်၏ တင်ပြဆွေးနွေးချက်များကို လက်မခံသူတို့၏ ဝေဖန်မှုများကို အစဉ်ကြိုဆိုလျက်ရှိသည်ကို စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးအား သိစေလိုပါသည်။
ပုံရိပ်နိုင်ငံရေး – အပိုင်း (၂)
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 22 2008 15:21 – မြန်မာစံတော်ချိန်
ကျနော့်အမြင်ကို ပြောရလျှင် ပုံရိပ်နိုင်ငံရေး ဆိုသည်မှာ ပေါ်လစီ (မူဝါဒ) ကို အခြေပြုသော နိုင်ငံရေး မဟုတ်တော့။ “လူ” ကို အခြေပြုသော နိုင်ငံရေး၊ နဖူးစည်းတပ်ပြီး နိုင်ငံရေး ကြွေးကြော်ခြင်းဟု မြင်မိသည်။ ယခုခေတ် နိုင်ငံရေးလုပ်သည်ဟု ဆိုသူများအကြားတွင် “မင်း … ထောင်ကျဖူးလား”၊ “မင်း … အန်အယ်လ်ဒီလား”၊ “မင်း … ဗကသလား”၊ “မင်း … ကျောင်းသားလား” ဆိုသည်က အရင် စမေးခံရသည်။ တချို့တွေဆိုရင် ထောင်ကျဖူးမှ လူရာဝင်နိုင်သည်ဟု ထင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် လူတချို့က ကိုယ့်ရာဇဝင်ကို ပိုပိုသာသာ ပြောလာကြသည်။ တချို့ဆိုလျှင် “ဘာရာဇဝင် ရှိခဲ့သလဲ” က စချင်ကြသည်။ ရာဇဝင်ရှိမှ နိုင်ငံရေး လုပ်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်မှာ နိုင်ငံရေးသမား ရှာရတော့မှာလဲ။
ယနေ့ နိုင်ငံရေးလောကတွင် ထောင်ကျဖူးမှ နိုင်ငံရေးအရ အရာဝင်သည်ဆိုသည့် အတွေးမှားကို ထောက်ပြချင်သည်။ ယနေ့ခေတ်သည် အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဲ့သို့ သခင်ပေါက်စ၊ ထောင် ၆ လ မဟုတ်တော့ပါ။ နအဖ ဖက်ဆစ်တို့အောက်တွင် ထောင် ၁ဝ နှစ်၊ အနှစ် ၂ဝ မှာ အသာလေး ဖြစ်သည်။ ထောင်ထဲဝင်၍ သူရဲကောင်းလုပ်စရာ မလိုပါ။ အဖမ်းခံမည်ထက်၊ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရင်း အကျိုးပြုနိုင်ပါသည်။ လူငယ်ခေါင်းဆောင် ကိုအောင်ဆန်းကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်၊ ကိုအောင်ဆန်းက အဖမ်းမခံ၊ ဤမူကို ခံယူသင့်သည်။ အရေးအခင်းဖြစ်လိုက်၊ ခေါင်းဆောင်တွေ ပေါ်လာလိုက်၊ အဖမ်းခံလိုက်ကြရနဲ့၊ သမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်း ဖြစ်နေကြရတယ်။
တဖက်ကလည်း “လူ” ကို တင်တိုက်သော ပုံရိပ်နိုင်ငံရေးအတွက် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ့လျှင် အင်္ဂလိပ်လို Larger than life ဟုခေါ်သည့် လူစင်စစ်ကနေ ဘုရားဖြစ်အောင် ဖန်တီးကြတော့သည်။ ဤအန္တရာယ်မှာ ကွန်မြူနစ် အာဏာရှင်စနစ်မှ သက်ဆင်းလာခြင်း ဖြစ်သည်။ မော်စီတုံး၏ ဗျူဟာမှန်ခဲ့၍ တရုတ်ကွန်မြူနစ်တို့ အာဏာရခဲ့သည်။ သို့သော် မော်စီတုံးသည် လူထဲက လူတယောက်သာ ဖြစ်သည်။ နတ်ဘုရား မဟုတ်ပါ။ လျူရှောက်ချီနှင့် တိန်ရှောက်ပိန်တို့က လက်တွေ့ ဦးဆောင်နေရာမှ အသာစီးရလာသည်။ ထိုအခါ မော်စီတုံးက အာဏာလုရန် ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးကို ဆင်နွှဲရာ လင်ပြောင်က ဖော်လန်ဖားပြီး မော်စီတုံး၏ အတွေးအခေါ် စာအုပ်ကလေးကို ရိုက်နှိပ်ကာ စစ်တပ်အတွင်း ဖြန့်ဝေရာမှ စာအုပ်နီသည် ကွန်မြူနစ်တို့၏ ကျမ်းစာဖြစ်ခဲ့ရ၍ မော်စီတုံးလည်း လူစင်စစ်မှ နတ်ဘုရား ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
အသေအချာ လေ့လာလျှင် မော်စီတုံး၏ အမှားနှင့် အာဏာမက်မှုကြောင့် တရုတ်သန်းပေါင်းများစွာ ပျက်စီးသေဆုံးခဲ့ရသည်။ တရုတ်တွေ မွဲတေခဲ့ရသည်။ မြောက်ကိုးရီးယားကို ကြည့်ပါ။ The Great Leader နှင့် Dear Leader တို့ နှစ်ဦးကို ဘုရားသဖွယ် ကိုးကွယ်နေကြသည်။ အမြင်မှန်ရသွားသော တိန်ရှောက်ပိန်က ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုထက် စနစ်မှန်ကန်ရေးကို ဦးစားပေးခဲ့သည်။ တရုတ်တွေ ကံကောင်းဖို့ ဖြစ်လာရသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် “လူ” သမတကို သစ္စာရှိရသည် မဟုတ်။ အခြေခံဥပဒေ Constitution ကို သစ္စာစောင့်ရသည်။ အခြေခံဥပဒေက Presidency သမတရာထူးကို ဖော်ထုတ်၍ (လူ)တွေက အရွေးခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် စနစ် System သည် အဓိက ဖြစ်သည်။ စနစ်အပေါ် သစ္စာစောင့်သိခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုခေတ် မြန်မာနိုင်ငံရေးတွင် စနစ် အရေးကြီးပုံကို နားမလည်ကြပေ။ (လူ) ကို အဓိကထား ပွဲထုတ်ကြသည်။ အဆင့်ဆင့် “လူ” ကို တင်တိုက်ကြသဖြင့် မိမိတို့၏ ခေါင်းဆောင်ပုံရိပ်၊ မိမိ၏ ပုံရိပ်တို့သည် ရှေ့တန်း ရောက်လာရပါသည်။
ထိပ်ဆုံးအဆင့် ဒေါ်စုကို ကြည့်ရအောင်။ ဒေါ်စုသည် ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာတွင် အထင်ရှားဆုံး ခေါင်းဆောင်များ စာရင်းတွင် ထိပ်ဆုံးမှ ပါဝင်သည်။ ဒေါ်စု၏ သတ္တိနှင့် အာဏာရှင်စနစ်ကို ဇွဲနှင့် ရင်ဆိုင်ရဲခြင်းအတွက် ဒေါ်စုသည် ဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်း Democracy Icon ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ဘာသာရေးနှင့် ယှဉ်ပြောရလျှင် မဂ်ဖိုလ် အဆင့်ရပြီးသူနှင့် တူသည်။ အပါယ်တံခါး ပိတ်၍ ကောင်းကင်ဘုံ ရောက်ရန်သာ ရှိတော့သည်။ သို့သော် ဒေါ်စုနှင့် အတန်ဆုံးဆုမှာ မြန်မာပြည် စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှ လွတ်ရန်ဖြစ်မည် ဟု ထင်မိသည်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အောင်နိုင်ရန်မှာ ဒေါ်စု တယောက်ထဲနှင့် မဖြစ်နိုင်။ ဒေါ်စုကို ထိုင်ရှိခိုးရုံနှင့်လည်း မရနိုင်။ ဒေါ်စုကို အသံကုန်ဟစ်၍ ထောက်ခံနေရုံနှင့်လည်း မရနိုင်။ ဒေါ်စုကို ထောက်ခံသော၊ တိုင်းပြည်ကိုချစ်သော လူအများ စုပေါင်း၍ အင်အားတည်ဆောက်ပြီး ဒေါ်စုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှသာ ဒေါ်စု အင်အားရှိမည်။ ဤအင်အားကို ပြနိုင်မှ နအဖ က ဒေါ်စုကို အရေးထားလာရပေမည်။
ကျနော်တို့ အများစုသည် ဤအင်အားကို တည်ဆောက်ဖို့ နားမလည်နိုင်ကြသလို စိတ်ဝင်စားခြင်းလည်း မရှိကြပါ။ အချင်းချင်း ပေါင်းစည်းနိုင်ရန် တအုပ်စုနှင့် တအုပ်စု ညှိနှိုင်းတိုင်ပင် ဆွေးနွေးပြီး၊ နားလည်မှုရှိလာအောင် လုပ်ဖို့ မကြိုးစားကြ။ ဒေါ်စု ဘွဲ့များ ထပ်ရရန် ကြိုးပမ်းသူက ကြိုးပမ်းကြ၊ စည်းရုံးသူက စည်းရုံးကြနှင့် ရွာလည်နေကြသည်။
ဒေါ်စုပြီးတော့ ကိုမင်းကိုနိုင် ထွက်လာသောအခါ ကိုမင်းကိုနိုင်ဘွဲ့ ရရန် ကြိုးစားသူများ ပေါ်လာကြပြန်သည်။ တဆင့်ပြီးတဆင့် ဘွဲ့များရရန်သာ ကြိုးစားနေကြရင်း အချိန်ဖြုန်းခဲ့ကြ၍ အနှစ် ၂ဝ တိုင် ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ရှေ့မတိုးနိုင်ကြသေးပါ။ ဤသည်မှာ ပုံရိပ်နိုင်ငံရေး၏ အန္တရာယ်ဆိုး ဖြစ်သည်။ ပို၍ဆိုးသည်မှာ ပုံရိပ်နိုင်ငံရေးကြောင့် ကိုယ်နှင့် သဘောထား မတူသူတွေကို အရင်ဦးအောင် တိုက်ခိုက်ထားရမည် ဆိုသည့် မသိစိတ်များသည် ယနေ့ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူများကြားတွင် ကိန်းအောင်း ငြိတွယ်နေကြသေးသည်။ ထို့ကြောင့် ညီညွတ်ရေးကို မတည်ဆောက်နိုင်ဘဲ အချင်းချင်း နှိပ်ကွပ်နေရင်း စစ်အာဏာရှင်ကို တိုက်ရန် အင်အား မစုစည်းနိုင်ကြတော့ပါ။
zero sum game ခေါ် သုံညအကြွင်း တွေးခေါ်ချက်
မဆလ စိတ်ဓာတ်ဆိုးနှင့် လူချသည့် အကျင့်ဆိုး ၂ ခုက ပုံရိပ်နိုင်ငံရေးနှင့် Zerosum game သူနိုင်ကိုယ်နိုင်၊ သုံညအကြွင်း တွေးခေါ်ချက်ကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ဤအတွေးအခေါ်က လုံးဝသုံည အနိုင်ရရေးကို ဦးတည်သည်။ အဆင့်ဆင့် နိုင်ငံရေးစစ်ပွဲ အနိုင်ရရေးထက် လုံးဝဥဿုံ အနိုင်ရရေးကို ရည်ညွှန်းသည်။ ကွန်မြူနစ်ပါတီ တောခိုတော့ ဤအတွေးအခေါ်နှင့် တောခိုကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ရန်သူကို အနိုင်တိုက်ရေးမှ လွဲ၍ ကျန်ဗျူဟာကို မစဉ်းစား။ မနိုင်မှ ငြိမ်းချမ်းရေးစကား ဆိုလာတော့ အစိုးရက အားသာလာကာ ဖြတ်လေးဖြတ်နှင့် ရက်ရက်စက်စက် ချေမှုန်းလာတော့ ကွန်မြူနစ်တွေ ပြေးကြရသည်။ သခင်သန်းထွန်း၊ သခင်ဇင်၊ သခင်ချစ်နှင့် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် အများအပြား အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည်။
သို့သော် ၎င်းတို့၏ Zero sum အတွေးနှင့် ဗျူဟာ Strategy က ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ အမွေဆိုးကို နောင် ခေတ်အဆက်ဆက် ခံယူရင်း – ကွန်မြူနစ်တို့၏ ဗျူဟာအမှားနောက် ဆက်လက်နင်းခဲ့ကြသည်။ Zero Sum game ကို ကစားလိုလျှင် (အင်အား) တည်ဆောက်ရမည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ခဲ့သလို လူတော်တွေကို ဘက်ပေါင်းစုံက စည်းရုံး (ဆွဲစေ့) ရမည်။ လူတော်တွေကို လိုချင်ရင် ဒီလူတွေကို နေရာပေးရမည်။ အောက်ခြေလူတန်းစား (Grass root) သာမက အဆင့်ဆင့်တွင် ခေါင်းဆောင်ကောင်းများကို မွေးထုတ်နိုင်ရမည်။ Next Generation ဟု ခေါ်သည့် နောက်ခေတ်လူငယ်များကို ပြုစုပျိုးထောင် မွေးထုတ်နိုင်ရမည်။ အခုတော့ ဒီလိုမဟုတ်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ (လူကြီး) များက (ရာသက်ပန်) နေရာယူထားကြသည်။ (ငါတို့ အစု) သာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ခံယူကြကာ မဆလစိတ်ဓာတ် အပြည့်နှင့် (မလုပ်၊ မရှုတ်၊ မပြုတ်) ခံယူချက်နှင့် အပြင်လူ အဝင်မခံ။
တောင်အာဖရိကတွင် မင်ဒဲလား (Mandela) ဦးဆောင်သော အေအင်စီ (ANC) တို့ အနိုင်ရသည်ကို ကြည့်လျှင် မင်ဒဲလားက သတ္တိရှိရှိနှင့် အသားရောင် ခွဲခြားနှိပ်ကွပ်သော အပါသိုက် Apartheid စနစ်ကို ထောင်ထဲတွင် စွန့်စားတိုက်ပြနေချိန်တွင် အောလီဘာတမ်ဘို (Oliver-Tambo) က ပြင်ပတွင် ခေါင်းဆောင်မှုပေးကာ အင်အားကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာ ထောက်ခံမှုကို အရယူနိုင်ခဲ့သည်။ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုကို ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ မင်ဒဲလားသည် အတိုက်အခံ အုပ်စု၏ ရုပ်လွှာ Icon သတ္တိ၊ အောလီဘာတမ်ဘိုက ပြင်ပမှ ခေါင်းဆောင်မှုတို့ ဟန်ချက်ညီစွာ ခေါင်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဒေါ်စုသည် မင်ဒဲလားကဲ့သို့ သတ္တိရှိသော ခေါင်းဆောင်။ ဒေါ်စု၏ သတ္တိကြောင့် မြန်မာသာမက တကမ္ဘာလုံးက ထောက်ခံလျက်ရှိသော ခေါင်းဆောင်။ သို့သော် ဤထောက်ခံမှုကို (အင်အား) ဖြစ်အောင် ခေါင်းဆောင်နေရာယူထားသည့် လူကြီးများက မတည်ဆောက်နိုင်ကြ။ တည်ဆောက်ရမှန်းပင် သိပုံမပေါ်ကြ။
အဝေးရောက် အစိုးရအဖွဲ့သာ လုပ်တတ်ခဲ့လျှင်၊ နိုင်ငံရေး နားလည်ခဲ့ကြလျှင်၊ အောက်ခြေကို စည်းရုံးသူတွေက စည်းရုံး၊ နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေကို လော်ဘီလုပ်သူတွေက လော်ဘီလုပ်၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု (Sanctions) ကို ဦးစီးသူတွေက ဦးစီး၊ တိုက်ပွဲဝင်နှင့် မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခဲ့ကြလျှင် (အင်အား)လည်း တဖြေးဖြေး တိုးတက်လာပြီး ထောက်ခံမှုလည်း တဖြေးဖြေး ကြီးထွားလာစရာ အကြောင်းရှိပါသည်။ အခုတော့ အနှစ် ၂ဝ လုံးလုံး (လုပ်ကြပါ၊ လုပ်ကြပါ) ဟု ကမ္ဘာပတ်၊ လိုက်အော်ကာ ပိုက်ဆံလိုက်တောင်း၊ ငွေတွေသုံး၊ အချိန်တွေòဖံး၊ အခွင့်အရေးတွေ ရှုံးခဲ့ရသည်မှာ တွေးတတ်လျှင် ရင်နာစရာ ကောင်းလှပါသည်။
လူကြီးများက အတွင်းစည်းဝိုင်းကာ လူနည်းစု သက်သက်နှင့်သာ အနိုင်တိုက်လိုကြသည်။ အနှစ် ၂ဝ ကျော် လာသည့်တိုင် စည်းဝိုင်းသာ ကျဉ်းသွားသည်။ တိုးတက်မှုမရှိ။ တိုင်းပြည်ပြင်ပတွင် ၅ ဦး တဖွဲ့နှင့်၊ ကိုယ့်စည်းကိုယ်တားကာ ကြိတ်ဝိုင်းတွေနှင့် အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ကွဲနေကြသည်။ ကြိုးဝိုင်းအပြင် ရောက်နေကြသည့် အုပ်စုများမှာ မဆလစိတ် အပြည့်နှင့် zero-sum ဗျူဟာကိုင်ကာ အချင်းချင်း ဝိုင်းဆဲနေကြသည်ကိုပင် နိုင်ငံရေး စွန့်စားမှုကြီးသဖွယ် ထင်နေကြသည်။ သူ့ထက်ငါ သတ္တိရှိပြနေကြသည်။ သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြခြင်း၊ ရှည်လျားလှသော ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ Website ထောင်၍ လူတကာကို ဆဲဆိုကြခြင်းကိုပင် နိုင်ငံရေး လုပ်နေကြသည်ဟု ယူဆကာ ဘဝမြင့်နေကြသည်။ နအဖ စစ်အစိုးရကို များများဆဲနိုင်သူကို ခေါင်းဆောင်အဖြစ် မှတ်ယူကာ ပုံရိပ်ကို အရောင်တင်နေကြသည်။ အင်အား မတည်ဆောက်နိုင်လျှင် တဦးပြီး၊ တဦး အိုပြီး သေမင်းခေါ်ရာ လိုက်ကြရမည်။ အာဏာရှင်စနစ် ပြိုကွဲမည် မဟုတ်ပါ။
ယနေ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေကို သုံးသပ်ရလျှင် ခေါင်းပိုင်းတွင် ဒေါ်စုသည် အနစ်နာခံကာ အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်နေသော်လည်း ဒေါ်စုနောက်က အင်အားအဖြစ် ပံ့ပိုးရမည့် ဒုတိယအဆင့် ခေါင်းဆောင်ပိုင်း မရှိပါ။ (စကားချပ်။ ။ ဦးဝင်းတင် လွတ်မြောက်လာ၍ မျှော်လင့်ချက် တက်လာသည်။ NLD-LA တွင် လူငယ်များ နေရာရလာခြင်းမှာ အားရဖွယ်ဖြစ်သည်။) တနည်းအားဖြင့် ခါးပြတ်နေပါသည်။ အတွင်းနှင့် အပြင်တွင် အုပ်စုအသီးသီးဖွဲ့ကာ အုပ်စုအချင်းချင်း အားပြိုင်နေကြသော်လည်း အချင်းချင်း အချိတ်အဆက် မရှိကြ။ စည်းဝိုင်းဖွဲ့ထားကြသော စက်ဝိုင်းများ မချိတ်မိကြ။ တကမ္ဘာစီ ဝေးနေကြသည်။ နောက်ဆုံး အချိန်ကြာလာတော့ ဒေါ်စုဆိုင်းဘုတ်ကို ထောင်ပြီး ခွင်ရိုက်စားရသည့် နိုင်ငံရေးလုပ်စားများ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာကြသည်။ ပုံရိပ်နိုင်ငံရေးကြောင့် ပြိုင်ဆိုင်မှုများလာကာ အောက်ခြေတွင် ညီညွတ်မှု မရှိကြ၍ (အင်အား) မတည်ဆောက်နိုင်ကြပါ။ မြေစာပင်ဖြစ်ရသူများမှာ အသက်စွန့်၍ တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ အောက်ခြေက သူရဲကောင်းများနဲ့ ပြည်သူတွေသာ ဖြစ်တယ်။
၈ လေးလုံး လူထုတော်လှန်ရေးကြီးနှင့် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးအကြား ၁၉ နှစ် ရှိပါသည်။ ဤ ၁၉ နှစ်အတွင်း တော်လှန်ရေး အင်အားစုအတွင်း ဘာများ ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ပါသလဲ။ ဘာမှ မပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ ၈၈ အုပ်စုနောက်ပိုင်း မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်များ မပေါ်ပေါက်ခဲ့တော့ပါ။ အကြောင်းမှာ လူငယ်လူသစ်များကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးလိုစိတ် မရှိကြ။ ပေးရမည်ကိုပင် မသိကြရုံမက နေရာရထားသည့်သူများက မဆလစိတ်ဓာတ် အပြည့်နှင့် ထိုင်ခုံ မဖယ်ပေးလိုကြ။ အချိန်တွေသာ ကုန်သွားသည်။ တိုးတက်မှု မရှိကြသည်ကိုလည်း ဂရုမပြုနိုင်ကြ။ မျက်စိမှိတ်ကာ လုံးဝ အနိုင်ရရေးကိုသာ ဇွတ်အော်နေကြသည်။ လုံးဝအနိုင်ရရန် လိုအပ်ချက်များကို မစဉ်းစားကြ။ မပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါ။
ရလာဒ်မှာ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကြီး ပေါ်ပေါက်လာသောအခါ ဦးဆောင်ရမည့် ခေါင်းဆောင်နှင့် အဖွဲ့အစည်း မရှိဘဲ နိုင်ငံရေးအရှိန်၊ တိုက်ပွဲအရှိန်ကို မမြှင့်နိုင်ကြ။ ထို့ကြောင့် စစ်အစိုးရက ဂမ်ဘာရီကို ဘန်းပြ၍ ဒေါ်စုနှင့် လှည့်၍ မျှော်လင့်ချက် ပေးလိုက်တဲ့အခါ၊ စစ်အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ ထောင်ချောက်ထဲကို တန်းဝင်သွားကြရတာပါ။ ဒေါ်စုကိုယ်နှိုက်လည်း အသုံးချခံလိုက်ရတယ်လို့ ခံစားရမိတယ်။
လက်ရှိဖြစ်ရပ်များနှင့် နိုင်ငံရေး အခြေအနေကို သုံးသပ်ရာတွင်၊ အမှန်တရားကို အခြေပြု၍ သတ္တိရှိရှိ ဝန်ခံစိတ်နှင့် သုံးသပ်ကြည့်လျှင် စစ်အာဏာရှင်အစိုးရနှင့် အတိုက်ခံတို့သည် ဒီမိုကရေစီကို အခြေပြု၍ တိုက်ပွဲဝင်နေကြခြင်းဟု ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောနိုင်သော်လည်း ကျင့်စဉ်များမှာ မဆလစိတ်ဓာတ်ကို အခြေပြုသော ကွန်မြူနစ် ကျင့်စဉ်များသာ ဖြစ်သည်။ ဦးနေဝင်းသည် ၎င်း အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် ကွန်မြူနစ်တို့၏ ဗဟိုဦးစီးစနစ်ကို ယူလာကာ စစ်ဗိုလ် လူထွက်များနှင့် ကွန်မြူနစ်လူထွက်များကို အားယူကာ “မဆလ” ပါတီကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် “အာဏာ” ကို ရအောင် မတိုက်နိုင်သောအခါ အာဏာရနေသော “မဆလ” ပါတီသို့ ကွန်မြူနစ် အများအပြား ဝင်ရောက်ကာ တဆင့်ခံ အာဏာကို ဝင်ရောက်ရယူခဲ့ကြသည်။
၎င်းတို့နှင့်အတူ ကွန်မြူနစ်ပါတီမှ အကျင့်ဆိုးများ ပါလာကာ ဗဟိုဦးစီးစနစ်ဆိုးမှ စီးဆင်းလာသော မဆလ စိတ်ဓာတ်နှင့် အကျင့်ဆိုးကြီးသည် မြန်မာပြည်တပြည်လုံး ပြန့်နှံ့ခဲ့ရသည်မှာ ယနေ့တိုင်ဖြစ်သည်။ ကျနော့်အမြင်ကို တင်ပြရလျှင် ဦးနေဝင်း၏ အမွေဆိုးမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ၎င်းကိုယ်ကျိုးအတွက် ထူထောင်ခဲ့သည်သာမက မဆလ စိတ်ဓာတ်နှင့် အကျင့်ဆိုးကို တပြည်လုံးကို ဖြန့်၍ တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဒီစိတ်ဓာတ်နှင့် ဒီအကျင့်ကို မြန်မာတပြည်လုံး မဖျောက်နိုင်ကြသေးပါ။
နအဖ စစ်အစိုးရသည် မဆလစိတ်ဓာတ်ကို အခြေခံ၍ ဖက်ဆစ် အာဏာရှင်တို့၏ ကျင့်ထုံးအတိုင်း အာဏာသုံး၍ အများပြည်သူကို နိုပ်ကွပ်ရာမှ ဦးနေဝင်းခေတ်ကထက် ပိုမိုယုတ်မာနှိပ်စက်သော ဖက်ဆစ်ရုပ်ပုံ ပိုပေါ်လာသည်။ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးနှင့် နာဂစ် မုန်တိုင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၏ ဖက်ဆစ်ရုပ်သည် ပိုပေါ်လွင်လာကာ စစ်တပ်က (ပြည်သူ) ကို (ရန်သူ) အဖြစ် သတ်မှတ် ဆက်ဆံလာသည်မှာ ထင်ရှားလာပါသည်။
စစ်အာဏာရှင်ပီပီ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေသည် အာဏာနှင့် ရာထူးကို လက်မလွှတ်နိုင်။ အောက်က ဗိုလ်ချုပ်များ၏ ထောက်ခံမှုရရန် ဆရာ၊တပည့် ကြည့်ရှုသည့် Patronage စနစ်ကို ကျင့်သုံးကာ လူတွေကို ငွေနှင့် အာဏာပေးကာ ခိုင်းစားခဲ့ရသည်။ ခိုင်းစားလျက်လည်း ဖြစ်သည်။ အဆင့်ဆင့် အာဏာနှင့် ငွေပေး၍ ခိုင်းစားကြရာက တိုင်းပြည်လည်း မွဲ၍ မြန်မာပြည်လည်း “သူခိုး” နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ရပြီ။ မဆလ စိတ်ဓာတ်ကို အခြေခံခဲ့ရာမှ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးတို့ သွားရာလမ်းအတိုင်း လက်ရှိ နအဖ အစိုးရသည် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးကို ချစ်စိတ်ပျောက်ကာ တကိုယ်ကောင်းစိတ် အစွန်းရောက်သော ဖက်ဆစ်စစ်စစ် ဘဝသို့ ရောက်ကာ တိုင်းပြည်လည်း တရုတ်ကျွန်ဘဝ ရောက်ခဲ့ရပြီ။ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေကတော့ စိန်စီသော သမီးများ ခြံရံလျက် ပုလ္လင်ထက်မှ မဖယ်နိုင်ရှာသေးပါ။
ဒီမိုကရေစီအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြသော တော်လှန်ရေး ရဲဘော်ကြီးများကို ကြည့်လျှင်လည်း အများစု၏ အခြေခံမှာ မဆလ စိတ်ဓာတ်နှင့် ကွန်မြူနစ်တို့၏ အကျင့်ဆိုးများပင် ဖြစ်သည်။ အစိုးရ၏ ဖမ်းဆီး နှိပ်ကွပ်ခြင်းဘေးမှ ကင်းလွတ်ခဲ့ကြသော အတွင်းနှင့် အပြင် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို ကြည့်လျှင် မိမိတို့၏ ရာထူးနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို မစွန့်လွှတ်လိုကြ။ ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲဝင် နေကြသူများပင် ဖြစ်သော်ငြားလည်း ဝေဖန်မှုကို မခံနိုင်ကြ။ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်တွင် မရှိမဖြစ်သော Transparency ဟု ခေါ်သည့် ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ဆောင်ရွက်မှုကို မလိုလား။ ကြိတ်ဝိုင်းကလေးများ ဖွဲ့ကာ ကြိတ်စားနေကြသည့် အကျင့်က မပျောက်ကြ။ ဝေဖန်ပိုင်းခြား စဉ်းစားခြင်း Critical Thinking ကို ဦးစားမပေး။ “ငါပြောတာ နားထောင်၊ ငါခိုင်းတာ လုပ်၊ ပြန်မပြောနဲ့” ဟူသော အကျင့်ဆိုးကို မဖျောက်နိုင်ကြသေးပါ။ အချိန်ကြာလာသောအခါ တော်လှန်ရေး အနိုင်ရရှိရေးထက် ကိုယ့်အဖွဲ့၊ ကိုယ့်အုပ်စု၊ ကိုယ့်ရာထူး တည်မြဲရေး အဓိက ဖြစ်လာကြပါတော့သည်။
နအဖ အစိုးရက အာဏာကို သုံး၍ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးကို အဓမ္မပြုကျင့်ကာ ခိုးစားလာကြသည်။ ဒီမိုဘက်သားများက ဒေါ်စု အမည်ကို အသုံးပြုကာ လုပ်စားလာကြပါတော့သည်။ ဤသို့ ဖြစ်ရသည်မှာ နှစ်ဖက်စလုံး၏ အခြေခံမှာ ဦးနေဝင်း အမွေပေးခဲ့သော မဆလ စိတ်ဓာတ်နှင့် အကျင့်ဆိုးဖြစ်သည်။ မဆလ စိတ်ဓာတ်နှင့် အကျင့်တို့ အဖျားခံရာသည် ဗဟိုဦးစီးစနစ်နှင့် မက်(စ်) Marx အတွေးအခေါ် ဖြစ်သည်။ ဤသည်တို့မှ ပုံရိပ်နိုင်ငံရေး မိမိဘက်အနိုင်ရရေး Zero Sum Game အတွေးအခေါ်တို့သည် ယနေ့ထက်တိုင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် လွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်။
ဤအခြေအနေကြားမှ အလင်းရောင်တန်းတခုကို မြင်မိ၍ အားတက်မိသည်။ လူကြီး၊ လူလတ်ပိုင်း (၄ဝ-၇ဝ) တန်းများကြားတွင် ပုံရိပ်နိုင်ငံရေးကို ဖက်ပြီး အချင်းချင်း နှိပ်ကွပ်ကာ နိုင်ငံရေးအသေသတ်ရန် ကြိုးစားနေသော်ငြားလည်း အင်တာနက်ခေတ်တွင် ကြီးပြင်းလာကြသော လူငယ်ပိုင်းတွင် Critical Thinking ဟု ခေါ်သည့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားမှု အတွေးရှိကြသည်။ ပြောတိုင်းမယုံကြ။ လေ့လာပြီးမှာ လက်ခံပုံရသည်။ ပြည်တွင်းတွင် ခေတ်ပေါ် Wave မဂ္ဂဇင်းမျိုး ဖတ်ရှုလေ့လာ နှစ်သက်လာကြသည်။ လူကြီးများက လူငယ်များကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးဖို့လိုသည်ဟု မြင်မိသည်။ ထို့ထက် တလှမ်းတိုးဖို့ လူငယ်တွေအတွက် နေရာပေးဖို့လိုသည် ဆိုချင်သည်။ ၈၈ မျိုးဆက် ပြီးကတည်းက လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တို့ နေရာ မရကြ။ လူငယ်လှိုင်း (New Wave) ကို ဖော်ထုတ်ဖို့ လိုသည်။
အရေးအကြီးဆုံး အမြင်တခုမှာ ဒီလူငယ်တွေကို လူကြီးတွေ၏ “ဆိုးမွေ” ဖြစ်သော ပုံရိပ်နိုင်ငံရေး၊ လူချနိုင်ငံရေးကို လူငယ်မျိုးဆက်များကို မပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းစေချင်သည်။ မဆလ စိတ်ဓာတ်ကို လက်ဆင့် မကမ်းမိရန် သတိပြုစေချင်သည်။
အမှားကို မြင်မှ အမှန်ကို ပြင်နိုင်မည်။
အမှားကို ဝန်ခံမှ အမှန်ကို ပြင်ချင်စိတ်ရှိမည်။
နိုင်ငံရေးမှာ “အင်အား” မရှိဘဲ “အာဏာ” မရနိုင်ပါ။
“အာဏာ” ရဖို့ အဖွဲ့အစည်းနှင့် နိုင်ငံရေး အဆောက်အဦ Political Infrastructure ကို တည်ဆောက်ရမည်။
ညီညွတ်မှ “အင်အား” ရပါမည်။
အင်အား မရှိလျှင် အပြင် အင်အား UN/US၊ ကို အားကိုးနေကြရပါမည်။
နအဖကို လက်ဖြန့်တောင်း၍ မရပါ။
စနစ်မပြောင်းဘဲ၊ တိုင်းပြည် မထူထောင်နိုင်ပါ။
နိုင်ငံတကာအလယ်တွင် ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ နောက်ကျကျန်ခဲ့ပြီ။ အချိန်တွေ ဖြုံးနေဖို့၊ အခွင့်မရှိတော့ပါ။ ညီညွတ်ရန် အချိန်တန်ပါပြီ။
Burmese women’s rights “intact”: Junta’s ambassador tells UN
And the problems associated with women are also handled effectively by the civilian group Myanmar Women’s Affairs Federation (MWAF), which critics had …
“Lawyers in Burma do not enjoy freedom during judicial proceedings. Their rights to submitting the complaint arguing in court on behalf of their clients are …
Despite the praise, it is questionable whether their efforts have significantly helped Myanmar’s democracy movement. The generals remain firmly in power, …
Bangladesh mobilizes warships over Burma gas tensions
Bangladesh’s foreign minister Iftekhar Ahmed Chowdhury said he had warned Myanmar’s envoy to Dhaka that ”all steps would be taken to protect the …
Obama, McCain Have Totally Different Worldviews
NewsMax.com, FL –
Can you imagine an Arab democracy in that neighborhood? One good apple ruins the whole rotten bunch! The American pattern seems rather strongly to suggest …
Life is StillaStruggle Six Months after the Cyclone
By SAW YAN NAING Six months after Cyclone Nargis, inhabitants of the devastated regions of Burma are still struggling to survive, with many reliant on …
Rights & Wrongs: Burma, Niger, Migrant Workers and More
BURMA LEADER MARKS 13 YEARS OF IMPRISONMENT — The first lady of Burmese politics, pro-democracy leader Aung San Suu Kyi, marked 13 years under house arrest …
Pope to visit Burma
By UCA News Pope Benedict XVI says he is ready to makeastopover in Myanmar if he visits another Asian country, Archbishop Charles Maung Bo of Yangon told …
Obama on Burma
So, with the Illinois senator apparently on the threshold ofafour-year American presidency, what does his policy on Burma likely to be? …
Authorities Harass Activists’ Defense Lawyers
Last Thursday, Nyi Nyi Htwe, who represented 11 youth members of the National League for Democracy (NLD), was sentenced to six months imprisonment for …
Myanmar’s farmers pay for China’s oil thirst
1. China in Burma: The Increasing Involvement of Chinese Multinational Corporations in Myanmar’s Hydropower, Oil and Natural Gas, and Mining Sectors.
Junta Invites Gambari to Visit Burma Again
Officials said that the Burmese junta and the UN are currently engaged in negotiations over various aspects of Gambari’s visit. Prominent among these are …
Vote for Than Shwe
In case you don’t recognize the name, Than Shwe is the head of Myanmar’s military junta, once known as the State Law and Order Restoration Council, …
India’s Burma Policy Built on Shifting Sands
By engaging with the Burmese junta, India feels better served. To many, this looks as if India has adoptedadouble-standard policy toward Burma. …
New airport for popular tourist beach
An official at the Htoo Company, which maintains close relations with the Burmese military junta, said surveying work for the airport’s construction has …
These include the 2004 tsunami in Indonesia, Sri Lanka, Thailand, and India; the 2008 Nargis cyclone in Myanmar (formerly known as Burma); and devastating …
Obama’s presidency would benefit Asean
Both US and EU have up until now imposed the toughest sanction regime against the Burmese junta and its leaders. That hard-lined approach would not change …
Proponents are, of course, never sure who they are going to save, but consider the situations in Sudan, Somalia and Burma. In Sudan, we seeagenocidal …
Bangladesh ire over Burmese sea intrusion
The Burmese vessels were spied in the deep sea block 08-13, foreign ministry sources said. Myanmar’s Ambassador to Bangladesh U Phae Thann Oo was summoned …
PARKER: Laura Bush has done her part to help the world
… Page Editor Fred Hiatt wrote about Burma, where Laura Bush has playedaleading role in pushing for release of democracy leader Aung San Suu Kyi, …
Asia’s Top New Wineries
Wines-Info.Com, China –
Bangladesh protests Burma against sea intrusion
Myanmar Ambassador to Bangladesh U Phae Thann Oo was called to the Foreign office in the capital on the day to receive Dhaka’s protest note against the …
Myanmar: New Constitution Published In English
A bilingual edition of the 457-article constitution in English and Burmese went on sale Saturday (1 Nov) at government bookshops for 2000 kyat ($1.60). …
Hope dawns in post-Nargis Burma
“I think the storm, as tragic as it was, at least demonstrated to the regime that the international community does care about people in Myanmar (Burma),” he …
Rule of law only panacea to protect North Indian migrants
During British rule, the work force even crossed the shores to settle in Ceylon (now Sri Lanka), Burma (now Myanmar), West Indies and even Fiji. …
Different playbooks aimed at balancing Asia’s powers
And both, while recognizingacommon commitment to democracy, freedom, human rights and the rule of law, obligate the two sides to work together to build …